Samples of brown rice can be taken fromaspecial outlet by diverter valves. for easy inspection of quality and ﬂow rate.
Easy Inspection of separating conditions
The discharge side is covered withatransparent cover so that the separating conditions of the grain are easily checked.
Flow rates are adjusted byamanual remote lever on E model and by increase I decrease buttons on F model.
အလိုအလျောက် Stop Device
အညိုရောင်ဆန်နမူနာများကို diverter valves များမှအထူးထွက်ပေါက်တစ်ခုမှရယူနိုင်သည်။ အရည်အသွေးနှင့် FL ow မှုနှုန်း၏လွယ်ကူသောစစ်ဆေးခြင်းသည်။
လွယ်ကူသော Flow ညှိနှိုင်းမှု
စီးဆင်းနှုန်းကို E မော်ဒယ်ပေါ်ရှိလက်ငင်းအဝေးထိန်းလီဗာဖြင့်ချိန်ညှိပြီး F မော်ဒယ်ပေါ်ခလုတ်များတိုးလာခြင်းအားဖြင့်ချိန်ညှိသည်။
High yield and strong separating
Advanced automatic operation
Suitable for various kinds of rice and mixture
စပါးကို အခွံချွတ်ပြီးသောအခါ လုံးတီးနှင့် စပါးလုံးထွက်လာပါသည်။ စပါးလုံးထဲမှ လုံးတီးကို ခွဲခြားသန့်စင်ပေးသော စက်ဖြစ်ပါသည်။ရင်ခွဲနှစ်ခြမ်း ရင်ခွဲတစ်ခြမ်း စက်ဟု ခေါ်ကြပါသည်။ ဂျပန် ဆာတာတေး ဒီဇိုင်းပုံစံ စက်ဖြစ်ပါသည်။ တည်ငြိမ်စွာ အလုပ်လုပ်ပြီး စပါးလုံးနှင့် လုံးတီးကို ပြောင်စင်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားပါသည်။
ဇီးသီးခွဲခြမ်းမှ ဇီးခွဲခြမ်းနဲ့ ဇီးဆံကို ရာနှုန်းပြည့် ပြတ်သားစွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။